Zimbabwean Gospel Stars at War - allAfrica.com
Zimbabwean Gospel Stars at War
Gospel music star Fungisai Zvakavapano-Mashavave pulled out of the concert due to her rift with fellow gospel diva Shingisai Suluma, who she accused of plotting to soil her image.
Zimbabwe: 'Sai-Sai' Rift: Fungisai Exposed
GOSPEL songbird Fungisai Zvakavapano-Mashavave pulled out of the Red Rose Entertainment-sponsored gospel concert held at the Harare International Conference Centre for a more… Read more »
Photo: Fungisai Zvakavapano/Facebook
Zimbabwean Gospel Diva to Headline Concert
United States-based gospel star Shingisai Suluma will stage a homecoming show at the Harare International Conference Centre on December 29th. Read more »
Zimbabwe: Fans in for Treat - Shingisai Suluma Readies for Concert
Zimbabwe: Praise and Worship With Shingisai
Zimbabwe: Fungisai CD Auctioned for U.S.$200
FUNGISAI Zvakavapano-Mashavave scored a first at her album launch in Harare on Thursday after two of her CDs were auctioned for US$200. Zimbabwe Prison Service Commissioner Retired… Read more »
In a true festive season spirit, popular gospel diva Fungisai Mashavave will give prison inmates something to smile about when she performs for free at Chikurubi Prison on… Read more »
Zimbabwe: Fungisai Defends Jazz 105 Shows
Gospel songstress Fungisai Zvakavapano-Mashavave has defended her performances at Jazz 105 early this year, saying it was part of her research project. Read more »
Zimbabwe: Fungisai Joins NBSZ
Gospel songstress Fungisai Zvakavapano- Mashavave has been appointed the brand ambassador of National Blood Service Zimbabwe (NBSZ), a non-profit organisation responsible for the… Read more »
Zimbabwe: Drumbeat - Is Gospel Diva Fungisai Backsliding?
Zimbabwe Standard, 18 February 2012
When I heard Fungisai Zvakavapano-Mashavave would perform at Women-in-Jazz Festival I thought she had done the right thing to be in solidarity with other female musicians besides… Read more »